Jen. al-Raisi: Waa kuma hogaamiyaha cusub ee booliska adduunka ee lagu dhagan yahay? - Bulsho News
Nin ku dhawaaqay inuu yahay musharax madaxweyne oo dil lagu...
Jen. al-Raisi: Waa kuma hogaamiyaha cusub ee booliska adduunka ee lagu dhagan yahay?
Jenaraal u dhashay dalka Isutagga Imaaraadka Carabta oo lagu eedeeyay inuu dowr ku lahaa jirdil loo geystay dad maxaabiis ah ayaa loo doortay hogaamiyaha hay’adda booliska adduunka ee Interpol.
Axmed Naasir al-Raisi oo sarkaal sare ka ah wasaaradda arrimaha gudaha ee Imaaraadka ayaa xilkaas oo aan wax mushaar ah lagu qaadan loo doortay afarta sano ee soo socota.
Hay’adaha xuquuqda aadanaha ayaa dedaal badan u galay in aan loo dooran xilkaas, waxaana ay ku eedeeyeen inuu baari waayay eedeymo loo qaateen ah oo ka dhan ah laamaha ammaanka Imaaraadka oo lagu eedeeyay inay jirdil u geysteen maxaabiis.
Jenaraal al-Raisi ayaa beeniyay eedeymaha loo jeediyay.
Wasaaradda arrimaha dibedda ee Imaaraadka oo eedeyntaas ka hadashay ayaa sheegay “inay rumaysan tahay in tacaddiyada iyo xadgudubka ay ku kacaan booliska ay yihiin wax xun oo aan loo dulqaadan karin”.
Jananka ayaa lagu doortay cod bixin wareegga saddexaad la isla gaaray oo ay xubnaha hay’adda Interpol ku yeesheen kulan guud oo ka dhacay magaalada Istanbul ee Turkiga.
Hawlaha uu qabanayo Jenaraal al-Raisi waxaa kamid ah inuu shir gudoomiye kulamada golaha fulinta oo dusha kala socda shaqada xoghayaha guud, Jürgen Stock, ninkaas oo ah sarkaal si joogta ah u maareeya hawl-maalmeedka Interpol.
Jenaraal al-Raisi ayaa sheegay inuu ka “maqsuuday” in loo doortay hogaamiyaha Interpol, waxaana uu ballanqaaday inuu “dhisi doono hay’ad u shaqeysa si hufan, isla markaana xaqiijisa badqabka dadka oo dhan”.
War kale oo qoraal ah ayuu ku sheegay in Isutagga Imaaraadka Carabta uu “mid kamid ah dalalka ugu ammaanka badan caalamka” isla markaana uu waddankaas hogaaminayo isbedalka wanaagsan ee ka socda gobolkaas ay xasaradaha hareeyeen.
Hiba Zayadin oo hay’adda Human Rights Watch u qaabilsan Khaliijka Carabta ayaa sheegtay in “maalin murugo leh ay u tahay caalamka iyo sarreynta sharciga adduunka”. Waxa ay intaa raacisay in jananka uu “wakiil u yahay mid kamid ah dowladaha ugu xukunka adag Khaliijka oo ciddii si nabdoon ku mucaaradda loo aqoonsado argagexiso”.
Doorashada Jenaraal al-Raisi ayaa waxaa sidoo kale dhaliilay aqoonyahan Matthew Hedges oo Britain u dhashay, kaasoo maxkamadda sare ee London u gudbiyay dacwad ka dhan ah jananka iyo saddex sarkaal oo kale, kuwaas oo uu ku eedeeyay inay ku jirdileen Imaaraadka.
Aqoonyahanka ayaa sanadkii 2018 lagu xiray Dubai xilligaas oo uu ku guda jiray cilmi-baaris qeyb ka ah waxbarashadiisa sare ee jaamacadda, waxaana dowladda Imaaraadka ay ku eedaysay inuu yahay basaas.
Nabadoon Maxamed Xasan oo loogu galay gurigiisa, kadibna...
Paul Pogba Oo Go’aamiyay Kooxda Uu Ku Biiri...